Demolish हुनेछ नौ-मास्को? अफवाहहरु र समाचार
ठूलो सार्वजनिक संगठनका साधारण नागरिकहरु देखि - रूसी राजधानी मा ठूलो मात्रा नवीकरण कार्यक्रम विभिन्न स्तर मा छलफलको व्यापक लहर कारण छ। dilapidated अपार्टमेन्ट को मालिक को मास्को प्रशासन जीवनमा सुधार गर्न इच्छा त unequivocal थियो। छलफल समयमा यो तर सामान्य मा प्रस्ताव अनुमोदन भेटे गरिएको छ, कार्यक्रम मा धेरै कमजोरी प्रकट भएको थियो। एकै समयमा, धेरै बासिन्दा नौ-मा मास्को सहन र केही घरहरू कार्यक्रम मा हुन सक्छ कि वा रूपमा अझै पनि प्रश्न हो।
विभिन्न पक्षबाट भवनहरु को तोडफोड लागि घटनाहरु र त्यहाँ एक विशेष अद्यावधिक कार्यक्रम आवास छ। मानक रूप नौ-निर्माण विश्लेषण को तोडफोड, प्राविधिक विशेषज्ञता र वस्तुको भविष्यमा मा निर्णय को पछि हटाउनका लागि प्रदान गर्दछ। यो यसको वर्तमान फारम, पुनर्निर्माण, मरम्मत वा तोडफोड मा घर राख्न हुन सक्छ। हालै, निर्णय अक्सर भवन को राज्य मा प्राविधिक निष्कर्ष मा आधारित छ जो एक न्यायिक कार्य, को जारी पछि छन्। त्यसैले demolish गर्न चाहे नौ-मास्को को प्रश्नको जवाफ, सामान्य मा, सकारात्मक, को dilapidated घरहरू नियमित पत्ता रूपमा हुनेछ। नियम, यो 40-50 वर्षीया डिजाइन र संचार को निर्माण मर्मत परे पहिले नै छ। यस तोडफोड कारण, तर प्राविधिक विशेषज्ञता सामान्यतया resettlement खाँचो पुरानो घरमा वसोवास को उपचार छ प्रारम्भ गर्न बरु।
2025 सम्म विकास रणनीति को रूपरेखा मा तोडफोड
धेरै वर्ष को लागि, मास्को गरेको विकास योजना, अप 2025 मा योजना अवधारणा लागि डिजाइन को शहरी विकास, उच्च-वृद्धि भवनहरु को विध्वंस मात्र होइन एक नौ-storied, तर बाह्र-कथा भवन सहित समावेश कार्यान्वयन। मिति गर्न, योजना dilapidated उच्च वृद्धि भवनहरु र व्यक्तिगत परिमार्जनहरू को अलिकति छाँटकाँट र छनौट तोडफोड लागि प्रदान गर्दछ। उदाहरणका लागि, भवन केही श्रृंखला द्वितीय-18 विनाश गर्न, तर घर द्वितीय-49 छोड्न निर्धारित। निर्णय खाता र अन्य सुविधाहरू मा लगिनेछ किनभने, त्यही विवादास्पद मुद्दा - odnopodezdnye नौ-मास्को सहन हुनेछ। पनि निर्माण अवधि एक विशेष परिमार्जन गर्न सम्बन्धित र तोडफोड को मामला मा योग्यता सही संकेत छ। तैपनि, सामान्य प्रवृत्ति आफ्नो घर र उच्च-वृद्धि भवनहरु गर्न साना उच्च वृद्धि देखि मान्छे को विस्थापन को दिशा मा छ। यस सन्दर्भमा, पनि एक नौ-गर्दै राजधानी मा एक घर घर को सर्वोत्कृष्ट ढाँचा साथै स्थानांतरण योजना छ पन्ध्र-निर्माण रूपमा देखेको छैन। यो पृष्ठभूमिमा, नवीकरण को कार्यक्रम थप स्पष्ट विरुद्ध।
पाँच तले भवन - यो भवन को सबैभन्दा नवीकरण कार्यक्रम समावेश। तर केवल यी घरहरू छैन विनाश हुनेछ। ख्रुश्चेव लागि पनि नौ-मंजिल्ला भवन लागू हुन्छ। अर्को कुरा दुवै प्रकारका सबै वस्तुहरु अन्ततः बसे हुने छैन भन्ने छ। हामी संकेत कुरा भने, यो मामला मा हामी घरहरू नै प्राविधिक अवस्था बारे कुरा गर्दै छन्। तसर्थ, प्रश्न Redevelopment परियोजना भित्र मास्को मा नौ-प्यानल सहन गर्ने कि नगर्ने रूपमा, घर को प्राविधिक अवस्थाको विश्लेषण पछि निर्धारण गरिनेछ। तर अर्को पक्ष छ। छैन कार्यक्रम समावेश छन् कि सबै भवनहरु छन् , महत्वपूर्ण अवस्था बासिन्दा लागि असुरक्षित। को अधिकारीहरु द्वारा उल्लेख रूपमा आफ्नो कार्य नवीकरण कार्यक्रम छ - यो भाडादारों जसको अर्को केही वर्ष मा घरमा चेतावनी बन्न सक्छ हेरचाह गर्न घर र अग्रिम मा सबै आपतकालीन demolish छैन। त्यसैले, यो चरण को विध्वंस को प्रश्न मा नवीकरण नौ-अन्तर्गत भाडादारों को मतपत्र द्वारा निर्णय गरिनेछ।
यस तोडफोड अन्तर्गत के घर पतन हुनेछ?
क्षणमा, म अझै घरहरू सूची विनाश गर्न गठन गरेको छैन। यसबाहेक, सर्तहरूको पनि तोडफोड स्वीकृत गरिएको छैन। मेयर अनुसार, नवीकरण कार्यक्रम 15 वर्ष को लागि डिजाइन गरिएको छ, त्यसैले पनि नौ-मंजिल्ला मा dilapidated भाडादारों एकदम लामो हुन सक्छ। एकै समयमा तोडफोड लागि वस्तुहरु को सूची पहिले नै निश्चित परियोजना मा हुन छन् घरहरू replenished। तिनीहरूलाई को सबै भन्दा - यो अझै पनि एक पाँच तले भवन छ, तर त्यहाँ उच्च वृद्धि भवनहरु धेरै छन्। हामी मात्र लक्षित शहर, यो रिङ रोड नजिक को बीचमा भाग मा स्थित भवनहरु को कि धेरै थाहा छ। यो उत्तर र उत्तर-पूर्वी विशेष गरी साँचो हो। साथै, प्रभावित हुनेछैन भन्ने सारा क्षेत्रमा छन्। उदाहरणका लागि, demolish गर्न चाहे को प्रश्न नौ-मा मास्को मेट्रो "Skhodnenskaya", हाल नकारात्मक जवाफ मान्छ। सायद व्यक्तिगत घरहरू भविष्य मालिकहरू बसोबास गर्न आफ्नो इच्छा व्यक्त हुनेछ, तर त्यहाँ यो five- र तीन-मंजिल्ला घरहरू मात्र demolish योजना बनाएका छ जसमा धेरै क्षेत्रहरु हुँदा।
म resettlement बाहिर रोज्न सक्नुहुन्छ?
हामी घर मा आपतकालीन को तोडफोड बारेमा कुरा गर्दै भने, अपार्टमेन्ट मालिक अदालत मा निर्णय चुनौती प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। तर, सबै भन्दा अक्सर पहिलो समाधान पछि मान्छे जीवित अवस्थामा स्तरवृद्धि गर्न सहमत हुनुहुन्छ। प्रायजसो तिनीहरू initiators रूपमा कार्य भन्ने तथ्यलाई उल्लेख गरिएको छैन। गाह्रो स्थिति सफ्टवेयर परियोजनाहरू को मामला मा छ - यदि यो घर मालिक चाहनुहुन्छ छैन, demolish गर्न चाहे नौ-मास्को? घर को समान नवीकरण को व्यवस्था अनुसार तपाईं मालिकहरूको तेस्रो को बन्दोबस्त विरुद्ध मतदान भने, कार्यक्रम मा प्रवेश गर्न सकिन्छ। अन्य अवस्थामा मा, तोडफोड को निर्णय अल्पसंख्यक राय देखि पनि अलग स्वीकृत गरिनेछ। क्षतिपूर्ति रूपमा कार्यक्रम लेखक को विनाश घरहरू को भाडादारों को सबै कम्तिमा एक सभ्य सम्पत्ति छ भनेर प्रतिज्ञा।
विनाश घरहरू को बासिन्दा के पाउनेछन्?
पहिले नै उल्लेख रूप मा, विनाश घरमा प्रत्येक घर मालिक आवास को लागत गर्न कम्तिमा समान प्राप्त गर्न योग्य छ। तर पनि यहाँ केही nuances छन्। twelve- वा fifteen- - पहिले, एक उच्च सम्भावना संग पनि नौ-भाडादारों उच्च भवनहरू गर्न पुनः स्थापित गरिनेछ। यो एक undoubted बेफाइदा, र मात्र एक छ। दोश्रो, को बन्दोबस्त, रिमोट क्षेत्रमा गरिनेछ दुर्लभ अपवाद संग। , केन्द्र बाहिर demolish हुनेछ केन्द्रीय जिल्ला र ZELENOGRAD मा नौ-मास्को - क्षणमा आफ्नो पूर्व घरमा नयाँ घरमा को बाध्यकारी सुनिश्चित गर्न कुनै स्पष्ट नियम छन् किनभने यो कुरा छैन। अर्कोतर्फ, प्रशासन एक विकास पूर्वाधार र आकर्षक वास्तु डिजाइन हुनेछ, सबै नयाँ घरहरू र अपार्टमेन्ट आज राम्रो स्तरमा कार्यान्वयन गरिने जोर।
मड्यूलर र पूर्वनिर्मित घरमा - फरक छ?
र तोडफोड को कार्यक्रम कागजातहरूमा प्यानल र ब्लक घरहरू अक्सर एक आपतकालीन संभावित रूपमा पङ्क्ति राख्नुभयो। विशेष गरी यो सीधा नवीकरण परियोजना मा उल्लेख छन् भनेर पूर्वनिर्मित भवन सम्बन्धित छ। मास्को मा नौ-ब्लक demolish हुनेछ - यति स्पष्ट छैन, तर यस्ता सुविधा को गिरावट बासिन्दा को संकेत को उपस्थिति मा राम्रो मेयर कार्यालय संग उजुरी फाइल गर्न सक्नुहुन्छ।
पुरानो घरहरू को तोडफोड मार्फत आवास अपडेट गर्ने र नयाँ निर्माण - एक साधारण अभ्यास भनेर लगातार सञ्चालन हुन्छ। आज राजधानी त्यहाँ थप ठूलो मात्रा प्रक्रियाहरु, जो आम को जीवित अवस्था सुधार मा लक्ष्य हो। तैपनि, त्यहाँ जो धेरै वर्ष को लागि छ जीवनको लागि उपयुक्त रूपमा आफ्नो घरहरू मूल्याङ्कन यस्तो कार्यक्रम को विरोधीहरूले छन्। यो अर्थमा, प्रासंगिक प्रश्न मास्को मा नौ-ईटा सहन छैन कि वा छ? यी घरहरू थप टिकाउ मानिन्छ र कारण थकान लोड-असर संरचना गर्न तोडफोड सूचीमा फस्न शायद। त्यसैले, धेरै कठिनाई बिना तोडफोड बिरुद्ध बोल्न, उहाँलाई बचाउन सक्नुहुन्छ ईटा घर भाडादारों संरक्षण मा रुचि। यो मात्र होइन नौ तले संग मामला, तर पनि Stalinist पाँच तले भवन हुन सक्छ।
अवधारणा र लाभ को प्रकार
कसरी कागज बाहिर swans बनाउन
म समुदाय antenatal क्लिनिक कसरी थाहा छ? यसलाई कुनै पनि antenatal हेरविचार मा दर्ता गर्न सम्भव छ?
एक श्रम विवाद को सीमा अवधि। श्रम विवाद लागि वकील
अंग्रेजी भाषामा लेखहरूको प्रयोग। के यो जान्न सम्भव छ?
Geotextile - यो के हो? विवरण geotextile, कैरेक्टराइजेशन र बिछाउने को एक विधि प्रयोग
म एक साथ एक एंटीबायोटिक र antiviral लाग्न सक्छ? दबाइ अनुकूलता